रेनु दाहालले ५ वर्षमा भरतपुरमा के-के गरिन् ? (यस्तो छ उनको रेकर्ड कार्ड) - Meronews
रेनु दाहालले ५ वर्षमा भरतपुरमा के-के गरिन् ? (यस्तो छ उनको रेकर्ड कार्ड)
मेरोन्यूज २०७९ वैशाख १६ गते ८:५४
काठमाडौं । ०७४ सालको स्थानीयतह निर्वाचनमा ४३ हजार १ सय २७ मत सहित नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दहाल चितवनस्थित भरतपुर महानगरपलिकाको मेयर बनिन् । देशभरका ६ वटा महानगर मध्ये उनी एक मात्रै महानगर हाक्ने महिला मेयर थिइन ।
शुरुमा रेनु दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे वुझौं :
झट्ट बुझ्दा रेनु दहाललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को छोरीका रुपमा चिनिन्छ । तर उनको पहिचानलाई नै मारेर प्रचण्डको छोरी भएकै कारण राजनीतिमा चार्मिक भएको भनेर परिचित गराईनुमा उनि प्रति अन्याय हुने देखिन्छ । किनभने रेणुले आफ्नो इमान र प्रतिष्ठाका लागि धेरै संघर्ष र योगदान गरेको उनको प्रोफाइल गहिरो गरी अध्ययन गर्दा देखिन्छ ।
उनको जम्म वि.सं २०२३ साल असार २६ गते भएको थियो । उनी राजनीति बुझने भएदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागिन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा उनी बाबु प्रचण्ड जस्तै भूमिगत भएर काम गरिन् ।
रेनु दाहाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीलाई पराजित गरेर भरतपुरको मेयर निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी मेयर निर्वाचित भईरहँदा विवादमा पनि परिन् । एमालेले उनलाई ‘मतपत्र च्याँतेर ’ चुनाव जितेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ ।
एमालेले लगाएको यो आरोप अव विगत भईसक्यो । अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा जस्तै यसपटक पनि रेनु कांग्रेस सहितको समर्थनमै फेरि भरतपुरको मेयरमा उम्मेदवार बनेकी छिन् । दोहोरएर उम्मेदवार बनिरहँदा उनले ५ वर्षमा के काम गरिन् ? प्रश्न पक्कै उठ्छन् ।
३.करिब ज्ञ अर्बको हाराहरीमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको संघ तथा प्रदेश सरकारसहितको लागत साझेदारीमाबोलपत्रआह्वानको चरणमा रहेको छ।